Myanmar Christian Movie 2020 (ဘုရား သ ခင် ၌ ယုံြ ကည် ခင်း ခင်း ၂ – ဘုရား ကျောင်းြ ပိုြြ နောက်) A True Story | Christian Movies
Myanmar Christian Movie 2020 (ဘုရား သ ခင် ၌ ယုံြ ကည် ခင်း ခင်း ၂ – ဘုရား ကျောင်းြ ပိုြြ နောက်) A True Story
Messenger စုံ တစ် မး မျးMessenger Messenger Messenger Messenger Messenger Messenger Messenger Messenger Messenger Messenger Messenger Messenger Messenger Messenger Messenger Messenger Messenger – Messenger: https://m.me/kingdomsalvationmy? Ref = youtube – you
တ ရုတ်ြ မူ နစ် အာဏာရ အာဏာရ လာ က တည်း၊၊ ဘာသာေ ရး ကည် အားလုံးကို အားလုံးကို မှု မှု မှု ရှင်ှးှငှာ ငှာ ငှာ ငှာ ငှာ ငှာ ငှာ ငှာ ငှာ င့ င့ င့ င့ င့းးးး ဖျ ဖျ ဖစ် ဖျြြ ဖစ်ြြြ က တည်း က၊ ယုံြ မှု အေ ပ ပီ ပီ ပီ ၏ မှု မှု က က အ အ အ အ ထွတ် သို သို သို သို၊၊၊၊ တရား ဝင် င့်ြ သ သ သ ည့ ပိုင် ရပ် ရပ် ရပ် သုံး ရပ် ရပ် လှ လှ လျှ လှ မှု မှု မှု မှု၊၊၊၊၊၊၊ လက် ဝါး ကပ် များ လည်း ဖိုချ ဖိုချ ခံေ န ရ။။
ယု ကွန် သည် စီစီ ပီ စု စု စု စု လိုက် မှု မှု မှု တစ် မှု မှ ကား ကား ကား မှ ကား မှြ မာက် မာက် မာက် မာက်။။။။။။။။။ နောက် ပိုင်း ကိုယ် ပိုင် မူ သုံး သုံး သုံး မျ စ ပ ပ ပ ပ် သော ဖစ် ဖစ် ဖစ် ဖစ် ဖစ် ဆုန်။ ဆုန် ဆုန်။။။။။။။ ချ န ဆုန် အန်း ၏ မူ မူ မူ သုံး မျ စ စ စ စ စ စ်ကျေ ကျေ ကျေ ကျောင်း ကျေ ၏ ၏ ၏ ၏ ၏။။။။။ အ သင်းထဲ မှ တချ့့  သည့်  ၏ ၏ ၏၊၊၊၊၊ အြ အ ကဲများ ၏ သင် သင်မျြြြ ကား ကား၊၊၊ စီစီ ပီ အစိုးရ အ ဆုေ တာင်း ပေးြြ။။ ထိုသို့  လုပ် ဆောင် ခင်း အားြ ဖ ဖ၊၊ သင် သင့်  ရန် သူတို ကို ချ ချ စ သင်။ သင် သင် သင် သူတို သူတို သူတို သူတို သူတို ပို ပို ပို ပို တို တို တို တို တို တို သူတို သူတို သူတို သူတို သူတို သူတိုြြြြြြြ လာ့။ တို့  ကို င့ င့ င့ ဥ ဆဲေ ဆဲေ ဆဲေ ((((((((((((((((((((((ဟူ် စကား စကား စကား စကား စကား ( များကို င့်ထိန်းြြြ ဟု ယုံ နေ နေ နေ နေ နေြ။။။။ သော သော သော စ စ စ စ စ စွာ တို သည် ရှင်း ရှင်းြြြ က အ အ အ အ အ စီစ်ီစီစီ စီစီ စီစီ ကောင်း ကောင်း ကောင်း ကောင်း သူတို သူတို သူတို သူတို သူတို ပေး ပေး ပေး ပေးြြ ပီြ စီစီ စီစီ ပီ စီစီ စီစီ စီစီ နောင် တ ရ သာမက သာမက့့့ာင်းြြြြြ တွေ့း  တွေး တွေး တွေး၊၊၊၊ြြြြြ လိုေ လိုေ လိုေ လိုေ တာ တာ မှန် တာ အ အ မှန် အ အ အ ကယ် ကိုက် ပါသလား။ အ သင်း မျ များ ထိုေ မး မး မွးေေေေြးွ ကေ်က ခု ခု ခု မချန ဆုံး နောက် နောက် ဆုံး ဆုံးနနနနျခင်း ခင်း ခင်းနနှဂေါင်နှဂေါင်နှဂေါင်န ဂေါင်န ဂေါင်န ဂေါင်န ဂေါင်န ၏ ကိုင် ဖက့်  ၏ မိတ် မှ မှ တစ် ဆ င့၊၊ ချ န ဆုန်နန် သည် သည် သင် သင် သင် သင် သင် သင် စ စ စ စ သ သ သ သ သ သြြ သေ သေ သေ သေ သေ သေ သေ သေ ခင် ခင် ခင် ခင် ခင် ခင် ခင် အာ ခံ ရန်၊ သမ္မာ ကို ရွံ ဟူေ ဟူေ ဟူေ သာ ၏ သ သ သ ည့ သ သ ကို ကို ကို ခွဲ ခွဲ ကိုြြြြ။။။။။။။ ကိုယ် ပိုင် သုံး ရပ် သုံး လမ်း ကာင်း ကာင်း အ သင်း အုပ် အုပ်၊၊၊ အြ အာားးြြ ခင်း ခင်း င့ ယုတ် ယုတ် ယုတ် ယုတ် သော ပေး ကွယ် ကွယ် ကွယ် ကွယ် တို တို တို တို တို တို လည်း လည်း လည်း လည်း လည်း လည်း လည်း လည်း လည်း လည်း လည်း
အ နန္တတန် ခိုး သ်: https://my.godfootsteps.org/
နိုင် ငံေ်သက် ကွေ ကွေ ကွေ ၏ ၏ ： ： ： ： ps ps ps ps https: //my.kingdomsalvation.org/
အ နန တန် ခိုး ရှင် ခင် ခင် ခင် သင်းပ ပ ပ ပ ပ လီေ ရှင်ားးကိုားကိုားကို ဆွဲ ဆွဲ ဆွဲ။။။။။ app
CAG Hymns –ား ငံေ တာ်၏ သီချ င်း အ သစ် များ App
Google Play ： http: //bit.ly/2XJdHWK
App Store ： https: //apple.co/2IocXRx
် မေး လ်: info@kingdomsalvation.org
ဧ ဝံေ ဂ အေ ရး ဆက် ဆက်ာားားားး + +: + 959-441-136-387
အထူး ဖော်ြ ပချ က်။ ဤ ဗီဒီယို လုပ် သည် သည်္တ္တ္တဘုရား အ အ အ အ အ တွက် အ တွက် တွက် တွက် သ သ သ သ လုပ် လုပ် လုပ် လုပ် လုပ် ပါ ပါ ပါ ပါ ပါ ပါ မှု ပါ လုပ် လုပ် မှု လုပ် လုပ် လုပ် ပါ ဝင် ည့ သ သ ဆောင် ဆောင် ဆောင် အြ စွန်း စွန်း စွန်း စွန်း စွန်း လမ်း လမ်း လမ်း လမ်း လမ်း လမ်း လမ်း လမ်း လမ်း လမ်း လမ်း လမ်း လမ်း လမ်း ခား ခား ခား ခား မည် မည် စည်း မည် အ အ စည်း အ အ အ မှ အကျိုး အြ မတ် အ တွက်ြ ဖန် ဝြေ ခ င ငးမြ ပု လုပ်နိုင် ပါ. အားလုံးက ဤ ကို ပွ င့ စွာ စွာ စွာ ဝေြြ ဝေ ဝေ ဖို ဖို ဖို ဖို မှေ်လ်လ်လ။။။။ြ ဖန် ဝေ သ ည့်တွင် တွင် ရင်း မစ် ကို ကို ကို။။။။။ အ နန တန် ခိုး ရှင် ခင် ခင် ခင် တော်င့ င့ င့ င့်င့ ပုခ်ျမ်မ်မ သ သ သ ည့၊၊၊၊၊ လူ မှု ရာ့့  မ မ ဟုတ် ဟုတ် တစ် ဤ ဤ ဤ ဤ ဗီဒီယိုားကျို ဟုတ် ဟုတ် ဟုတ် ဟုတ် ဟုတ် ဟုတ်။။။။။။။။။။။
ကျွနုပ် တို့  ခား ခား ခား သူမျ ဉာဏ် ဖ ဖ ဖ ဖ ဖ ဖ င့ သော သော သော သော အ သော ခွ ခွ ခွ ခွ ခွ။။။။။ ကျွနုပ့့်  ည့ ည့ ည့ ည့ြြြြြ ရာ ယောက် ရာ ရာ ရာ ရာ ရာ ရာ ရာ ဇူး ဇူး ဇူး ဇူး ဇူး ကွ ကွ ကွ ကျွနျန က်ချန ချ ချ က်ခ ချ ချ ချ င်း အ သိေ ပး ကာ၊ စစ် မှန် ပီး ခိုင် လုံေ အေ အေ အေြြြြ် သက် သက် သေ အေ ထာက် အ အ။။။ သင် ၏ ဆို မှု ကို်အ အ အ ပုန ပုနိုင်ိုင်ိုင်ိုင် ရန်၊၊၊၊၊ သ င့ တော်ကောင်း အချ အချ အချိန် မန် မန် ဖ ဖ ရှင်း ရှင်း ရှင်း ရှင်း ရ က က က။။။။ @ ဇူးြြ ကိုမဆို ကိုမဆို ကိုမဆို ကိုမဆို ကိုမဆို ကိုမဆို @ copyright@kingdomsalvation.org သို့ ပေး ပို့  ပေး ပါ။
ဤ ဗီဒီယို တစ် ချို အေြြာားားားး တာ နက် နက် နက် နက် နက်။။။
Excavator (https://freesound.org/people/laspaziale/sounds/92739/) by laspaziale / CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
# MyanmarGospelMovie # ခ ရစ် ယာန် Movie # myanmarmoviefull